प्रचण्ड र माधवको ‘मिसफायर’ « Pathibhar Online
बिश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लगायतका वाहय अनुसन्धानले कोभिडबिरुद्धको लडाईमा नेपाल सरकारले राम्रो गरेको प्रमाण दिएका छन् । बैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता बढेको छ, प्रतिकूल अवस्थामा पनि आर्थिक सूचक सकारात्मक छन् । नक्सा अद्यावधिक र नागरिक विधेयकमा सात बर्षे प्रावधान ऐतिहासिक सफलता हुन भने अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूले एक्लै नक्सा अद्यावधिक गरेको दावी कहिले पनि गर्नुभएको छैन, सबै पार्टी र तीन करोड नेपाली जनताको एकताको वलले सम्भव भएको बताउनुभएको छ । जव प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो दावी गर्नुभएको छैन भने व्यक्तिको देवत्वकरणको प्रश्न कसरी उठ्छ ? कसैले त्यसमा आफ्ना दष्टिकोण राख्योभने त्यसमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन सम्झेर झस्कनु उचित हुन्छ र ? प्रचण्ड र माधवले आफूहरुकै नेतृत्वमा नक्सा जारी भएको भनेर भन्दा हुन्छ, त्यसमा पार्टीले श्रेय लिंदा पनि हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफूले एक्लै नक्सा अद्यावधिक गरेको दाबी कहिल्यै पनि गर्नुभएको छैन, सबै पार्टी र तीन करोड नेपाली जनताको एकताको बलले सम्भव भएको बताउनुभएको छ । जब प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो दाबी गर्नुभएको छैन भने व्यक्तिको देवत्वकरणको प्रश्न कसरी उठ्छ ? कसैले त्यसमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्यो भने त्यो प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन सम्झेर झस्कनु उचित हुन्छ र ?
अर्को वहस विकल्पसँग पनि जोडिएको छ । अहिले ओली सरकारले काम गर्न सकेन भन्नुको अर्थ के हुन्छ ? नेकपाको सरकारले पनि सकेन भन्ने लाग्छ वा लाग्दैन ? यही अवस्थामा ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड वा कोही प्रधानमन्त्री बन्दा सरकारले काम गर्न सक्छ भन्ने सुनिश्चितता हुन्छ ? अवस्था यही रहने तर व्यक्ति परिवर्तन हुँदा नाटकीय विकास हुन्छ भन्ने सोच तार्किक छ ? फेरी ओली, प्रचण्ड र नेपालको विगतको सत्ता संचालनको रेकर्ड पनि हेर्नुपर्छ । प्रचण्ड र नेपालहरुले जनमत बुझ्दा हुन्छ । कार्यकर्ताकै धारणा बुझ्दा हुन्छ । सर्वसाधरणको मत लिंदा पनि हुन्छ । ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजिनामा दिंदा देशको विकास हुन्छ भन्ने ठोस आधार प्रचण्ड नेपाल कमरेडले दिनसकेको भए मान्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि छैन ।
समाधानउन्मुख वातावरणका बिचमा किन फेरी प्रचण्डले शुक्रवार एकाएक ‘मिसफायर’ गर्नुभयो ? पार्टी मिलाउनकै लागि रणनीतिक बाटो अपनाएको भए ठिकै छ । सबैको हकमा मिल्दा सुरक्षित, नमिल्दा जोखिम छ । यति बुझ्दा पुग्छ ।